Libhanon - ALinks
Ufumana njani umsebenzi eLebhanon?
Novemba 20, 2020 UAntika Kumari imisebenzi, Libhanon
ILebhanon lilizwe elikwiMpuma yeMeditera. Ungalindela ukufumana inqanaba lokuphendula nge-0.5 ukuya kwi-1.0 yepesenti kunye neziza ezingezantsi (abantu abaza kuphendula kuwe abo ufake isicelo sakho / i-CV). Nangona kunjalo, ndiyakubongoza
Amakhonkco eLebanon, iwebhusayithi yolwazi, amaqela engxoxo
Oktobha 11, 2019 demi Libhanon, amakhonkco aluncedo
Amalungelo kwiNkqubo yokuThunyelwa kuluhlu lwabanikezeli boncedo lwezomthetho be-pro bono sisikhokelo semibutho, amagqwetha, kunye nabanye abakwaziyo ukunceda iimbacu mahala-kwimicimbi yezomthetho kunye nokunceda amalungelo akhuselekileyo. Olu luhlu lusenokuba lwe